And just as in thee- Inglês - Birmanês Traduçãoeexemplos
Você procurou por: and just as in the early days , (Inglês - Birmanês)
ငါသည် လွန်လေပြီသောနှစ်၊လ၊ ဘုရားသခင် စောင့်မတော်မူသော နေ့ရက်၌ဖြစ်သကဲ့သို့ တဖန်ဖြစ် ပါစေ။
ထိုသူတို့သည် နေ့အချိန်၌ မှောင်မိုက်ကိုတွေ့၍၊ ညဉ့်အချိန်၌ကဲ့သို့ မွန်းတည့်အချိန်၌ စမ်းသပ်လျက် သွားလာကြ၏။
ငါထာဝရဘုရားသည် သင့်ကို အဲဂုတ္တုပြည်မှ ကယ်နှုတ်သော သင်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်၏။ ဓမ္မပွဲခံစဉ် တွင် နေတတ်သကဲ့သို့ တဖန်တဲတို့၌ နေစေမည်။
ယခုမူကား၊ ကျန်ကြွင်းသော ဤလူတို့၌ ငါသည် အရင်ကဲ့သို့မပြုဟု ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရ ဘုရား မိန့်တော်မူ၏။
ခိုင်မာသော စိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်။ သင်တို့အဘများသည် အနှစ်လေးဆယ်ပတ်လုံး ငါ့ကို အနည်းနည်း စုံစမ်း၍၊
အကြောင်းမူကား၊ မိဒျန်လက်ထက်၌ ပြုတော် မူသကဲ့သို့၊ ကိုယ်တော်သည် သူတို့ထမ်းရသောထမ်းဘိုး၊ ကျော၌ခံရသောတုတ်ကို၎င်း၊ ညှဉ်းဆဲသောသူ၏ လှံတံကို၎င်း ချိုးတော်မူပြီ။
in the early ninth century, for example, idi kurbon and idi ramazon were 'alien' holidays to our ancestors.
ဥပမာပြောရရင် ကိုးရာစု အစောပိုင်းတုန်းက အီဒီ ကူအာဘွန်နဲ့ အီဒီ ရာမဇွန် တွေက ငါတို့ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေအတွက်တော့ 'သူစိမ်းပြင်ပြင်' အားလပ်ရက်တွေ ဖြစ်ခဲ့တာပဲ။
ရေလွှမ်းမိုးခြင်းမဖြစ်မှီကာလ၌ နောဧသည် သင်္ဘောထဲသို့ဝင်သောနေ့တိုင်အောင် လူများတို့သည် စားသောက်လျက်၊ ထိမ်းမြားစုံဘက်လျက်နေ၍၊
ဂိဗာမြို့ လက်ထက်ကဲ့သို့ သူတို့သည် ကိုယ်ကို အလွန်ညစ်ညူးစေကြပြီ။ သူတို့အပြစ်ကို အောက်မေ့၍ ဒုစရိုက်များကို စစ်ကြောတော်မူမည်။
ယနေ့တွင် သင်တို့သည် ဗျာဒိတ်တော်အသံကို ကြားလျက် ရှိသည်ဖြစ်၍၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုရာကာလ၌ ရှိသကဲ့သို့၊ ခိုင်မာသော စိတ်နှလုံးမရှိကြနှင့်ဟု ကျမ်းစာ လာသည်အရာမှာ၊
ထို့ကြောင့် လူသားများတွင် sars-cov-2 ကူးစက်မှု အစောပိုင်းအဆင့်၌ အနည်းဆုံးအနေဖြင့် အမျိုးအစား i အင်တာဖရွန်ဒြပ်ကို တိုက်ကျွေးခြင်းမှာ အကျိုးရှိနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်တော်၏လူတည်းဟူသော အပေါင်း အဘော်မရှိဘဲ၊ တောတွင် ကရမေလတောင်ပေါ်မှာ နေရ သော အမွေတော်သိုးစုကို သိုးထိန်းနှင်တံနှင့် ထိန်းတော် မူပါ။ ရှေးကာလ၌ ရှိသကဲ့သို့၊ ဗာရှန်ပြည်နှင့် ဂိလဒ်ပြည် ၌ ကျက်စားသော အခွင့်ကို ပေးတော်မူပါ။
မရှောင်လျှင် သူ၏အဝတ်ရှိသမျှကို ငါချွတ်၍၊ သူဘွားသောနေ့၌ အဝတ်မရှိသကဲ့သို့ အဝတ်မပါ၊ ပြင်၌ ထုတ်ထားမည်။ လွင်ပြင်ကဲ့သို့ သုတ်သင်မည်။ သွေ့ ခြောက်သော မြေကဲ့သို့ ဖြစ်စေလျက် ရေအငတ်ထား၍ သေစေမည်။
ဗျာဒိတ်ဌာနတော်၌ ရှိသကဲ့သို့ကြိုးများကိုလည်း လုပ်၍တိုင်ထိပ်အပေါ်မှာ ထား၏။ သလဲသီးအလုံးတရာ တို့ကိုလည်း လုပ်၍ကြိုးပေါ်မှာ ဆွဲထား၏။
ခပ်သိမ်းသော စည်းစိမ်ဥစ္စာကို ရဘိသကဲ့သို့၊ သက်သေခံတော်မူရာလမ်း၌ ဝမ်းမြောက်ပါ၏။
sars ကူးစက်မှု အစောပိုင်းအဆင့်တွင် မကြာခဏ စိတ်ကျခြင်း၊ စိုးရိမ်မှုများခြင်း၊ အလွန်အကျွံ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းများ၊ စိတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွလွယ်ခြင်း၊ စိတ်ဝေဒနာရောဂါလက္ခဏာများ ပြသခြင်း၊ ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ခြင်းနှင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများအပါအဝင် စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအမျိုးမျိုး ဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိခဲ့သည်။
aflam hindia (Francês>Inglês)马来文字典kempis (Malaio>Chinês (simplificado))life isn’t perfect…but my hair is! (Inglês>Hindi)sax muvi (Xhosa>Inglês)kimochi yamate (Japonês>Inglês)aap apna khayal rakhna ok dost (Hindi>Inglês)muzika (Lituano>Italiano)vahemereline (Estoniano>Tcheco)it's hard to love again (Inglês>Tagalo)perfil tiroideo (Espanhol>Inglês)license (Grego>Inglês)when she has male best friend (Inglês>Hindi)tanamanmu (Indonésio>Wolof)jinkies (Inglês>Russo)mjhe apse baat nhi karni (Hindi>Inglês)hindi tumigil (Tagalo>Inglês)coccigea (Espanhol>Inglês)ani, 정말 나쁜 일이 있었다 (Coreano>Inglês)farm cation (Inglês>Português)maksud kamu (Inglês>Malaio)alma libre (Quechua>Espanhol)my darling (Inglês>Tagalo)आप 16 साल की लगती हो (Hindi>Inglês)pink belacan (Inglês>Malaio)kuichapa (Suaíli>Inglês)